တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ဆက်ကာ ဆက်ကာ တိုးပွားနေဆဲ။ ကြီးကြီးငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်လတ်လတ် လူစုံစွာ ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ရှိ၏။ ပြည်တွင်းက ပြည်ပက ... ။ နိုင်ငံရေးသမား၊ အနုပညာသမား၊ စီးပွားရေးသမား၊ ကျောင်းသား ... အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး ညီညာစွာ ပါဝင်ကြကုန်သည်။ | ဒီရေ
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ဆက်ကာ ဆက်ကာ တိုးပွားနေဆဲ။ ကြီးကြီးငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်လတ်လတ် လူစုံစွာ ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ရှိ၏။ ပြည်တွင်းက ပြည်ပက ... ။ နိုင်ငံရေးသမား၊ အနုပညာသမား၊ စီးပွားရေးသမား၊ ကျောင်းသား ... အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး ညီညာစွာ ပါဝင်ကြကုန်သည်။
Phyoe Ei Wai
ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ နှစ်ဟောင်းမှာ ကျနော်တို့တွေ ပြင်ပလေကို အတူတကွ ရှူရှိုက်ခွင့်မရခဲ့ကြပေမယ့်....နှစ်သစ်မှာ လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းခွင့်ရအောင်ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသော ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ
မြန်မြန်လွတ်တော့ဟေ့ နားတွေကန်းနေလား ခဏခဏသတိပေးနေရတာ
အကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားအမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါရှင့်..
အမေ့အပြုံးကိုမြင်ခွင့်ရဖို့ ကိုမင်းကိုနိုင် နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုအမြန်ဆုံး လွှတ်မြောက်ပါစေလို့ ထပ်ခါထပ်ခါဆုတောင်းပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိတာမို့ လွှတ်ဖို့နီးလာပါပြီ .....။
စိတ်မကောင်းစရာတွေပဲ ကြားနေရတယ်နော်....နှစ်သစ်မှာတော့ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ တွေ့မြင်ခံစားနိုင်ပါစေ...
Hla Yin Wine
နေ့စွဲတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးသလို ပေး လိုက် ....စောင့်တဲ့သူတွေကစောင့်လိုက်....ဟိုလူနဲ့တွေ့ ဒီလူနဲ့တွေ့ ....နားထောင်ကောင်းအောင်တွေပြော ...ကဲ .....ဘယ်နေ့ တွေရွေးမနေနဲ့ မြန်နိင်သမျှမြန်အောင်လွှတ်ပေးကြပါတော့။
May Mie Oo
FREE ALL PRISONERS OF CONSCIENCE IMMEDIATELY.
FREE ALL POLITICAL PRISONERS IMMEDIATELY
Thin Zar Soe
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ အရှင်ဂမ္ဘီရနှင့် ရဟန်းတော်များ၊ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး ချွှင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ ။
Suu Kyi Hlaing
Mg Maung Maung
ခေတ်အဆက်ဆက်ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်အောက်က ဗကသ သမိုင်းကိုအထွန်းတောက်ဆုံး
ဖြစ်စေခဲ့သူ ပြည်သူလူထုအတွက်မွေးဖွားလာခဲ့သူ ကျနော်တို့ရဲ့အဖြူရောင်သူရဲကောင်း
Nay Zaw Th-z
မင်းကိုနိုင်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ချွှင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါ~~~~
(28.12.2011)German Time 4:10 PM
D Nyein Lin
ကဲ ... ထောင်ပြောင်းလိုက်မဲ့အစားလွှတ်ပေးလိုက်တာကဟုတ်မယ်ထင်တယ်။ ဟွန်း ....... လူကြီးမင်းတို့ရေ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်သစ်ဆီကို လှမ်းနေပြီဆို ....... ကျုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးသင့်နေပါပြီ။အမြန်ဆုံးခြွင်းချက်မရှိအားလုံးကိုလွှတ်ပေးပါ။
Nay Myo Linn....လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဆိုတဲ့ အစိုးရဖွဲ့ပေးသူကြီးတွေ ဒီနေ့အင်းစိန်ထောင်က နိုင်ကျဉ်း ၃ယောက်ကို သွားတွေ့သတဲ့ သူတို့ကတော့ ၁၇(၁)နဲ့ ၅ည ဆွဲထားသူတွေကိုဘဲ နိုင်ကျဉ်းလို့ သတ်မှတ်သတဲ့ ကြားလို့မှတော်သေးရဲ့လား အရပ်ကတို့ရေ....။
မတရားချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး
အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းလျှက် ......
00:18 am <28,dec,2011> Thailand.
မင်းကိုနိုင်.. ဆိုတာ.. ဘယ်သူလဲ..
(၈၈၈၈)ကို ရာဇ၀င်ပြောင်တဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက စခဲ့တယ်။
(၈၈၈၈)ကြောင့် ဦးနေ၀င်း မဆလ အာဏာရှင်ပြုတ်ကျသွားတယ်။
မင်းကိုနိုင်..ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်.. မင်းကိုနိုင်..သူဟာ (၈၈၈၈)လုံးတိုက်ပွဲကြီးရဲ့ အလံကိုင်တပ်မှူး၊ သူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဖေါင်ဒါ။
သူဟာ နံပါတ်(၁) ကျောင်းသားသူရဲကောင်း..တကယ့်ခွပ်ဒေါင်းစစ်စစ်။
(ကျောင်းနံရံတစ်ဝိုက် မှာဒေါင်းအလံပြန်စိုက်မယ် ဟေ့) လို့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို ရာဇသံပေး ကြုံးဝါးခဲ့တာ သူပေါ့။ သူဟာမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကို အုတ်မြစ်ချခဲ့သူ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဖေါင်ဒါ။
ဘယ်သူပဲ ပြောင်းပြောင်း၊ ဘယ်သူပဲ ဘာလုပ်လုပ်၊ ဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်၊ မင်းကိုနိုင်ပါကိုပါရမယ်။ မင်းကိုနိုင်မပါ တဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ ဆားမပါတဲ့ဟင်းပဲဟေ့။ ဘယ်တော့မှစားလို့ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်....မင်းကိုနိုင်ကို အခုချက်ချင်း လွှတ်ပေးပါ... လူချီးမင်းတို့....မင်းကိုနိုင်နဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ကိုလွှတ်ပေးရင်ပေး၊ လွှတ်မပေးရင်တော့...( ကျောင်းနံရံတ၀ိုက် ကို ဗြောင်းဆန်အောင် ပြန်လုပ်ကြရအောင်) ညီနောင်ကျောင်းသား အပေါင်းတို့…
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ သာကုန်ကုန်သွားတယ်...ပြည်သူတွေတိုးတက်မှုဘာမှမရှိဘူး မဲလိမ်မဲခိုးပြီး နာဂစ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ စစ်ယူနီဖောင်းချွတ်များ သူတို့ ကိုနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုရေးနဲ့ သူတို့ ကောင်းစားရေးဘဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ နေရတယ်၊ ထိပ်ဆုံးက သမ္မတဆိုတဲ့ လူက အကျဉ်းသားမရှိဘူး ပြောလိုက် အောက်က ဝန်ကြီးဆိုသူတွေက သူတို့ ပါးစပ်ကနေ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးမယ်လို့ကြုံရင်ကြုံသလိုပြောနေကြတယ်...ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိချက်ခြင်း လွှတ်ပေးပါ ဒါဘဲ။
Hlaing Phyo Win
လွတ်ရေး ဒို့အရေး ဒို့အရေး
ု၂၈-၁၂-၂၀၁၂ ၅:၄၀ PM Malaysia
ကဲ ဘယ်လိုလဲ.....28 ရက်ရောက်ပြီနော်........31 ရောက်ဖို့ ဘယ်လောက်မှ မလိုတော့ဘူး.....နော်...ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာကို မလုပ်ပါနဲ့ .....လုပ်တဲ့သူအတွက်အရမ်းကို ပင်ပန်းရလိမ့်မယ်....လုပ်နိုင်တဲ့ သူကိုကျတော့ ဗျာ..............မပြောမပြောလိုက်ချင်ဘူး......အဲဒါကြောင့်လဲ မြန်မာ နိုင်ငံမတိုးတက်တာ..ငါ့ထက်သူသာ သွားမှာကိုကြောက်နေတယ်လေ...ထမင်းငတ်လို့့သေတဲ့မသာဆိုတာ တော့ မရှိပါဘူး....ဒါပေမဲ့ ငတ်လို့ ဆန်ပြုတ်သောက်နေရတဲ့သူတွေ တော့ရှိတယ်.......ပြောနေလိုလဲသိမှာလဲမဟုတ်ပါဘူး.....အောက်ကိုကြည့်ကွ.......
ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေး၊သန်ရှင်းသောအစိုးရဖြစ်ရန် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနှင်. သွေးစည်းခိုင်မာရေးကိုတည်ဆောက်ရန်လိုပါသည်။ယင်းအတွက်အပြန်အလှန်ယုံကြည် မှုလေးစားမှုရှိရန်လိုပါသည်။အပြောနှင်.အလုပ်ကိုက်ညီရန်နှင်.ကတိသစ္စာကိုတန်ဘိုး ထားရပါမည်။အလုပ်ဖြင်.သက်သေပြရန်မှာကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ခြွင်းချက်မရှိချက်ခြင်းလွှတ်ပေးပါ။
ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ ဗကသကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာတော်အရှင်သူတော်မြတ်တွေအားလုံးမတရားအကျဉ်းချခံထားရခြင်းမှ လွတ်မြောက်ကြပါစေ....
အကြမ်းမဖက် အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်နေတဲ့
ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးပါ။
Ei Mon Mon Oo......၄၇က်နေ့မှာတို့၇ဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့တကွ...အားလုံးလွတ်ပါစေ
ဦးမင်းကိုနိုင် နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံး အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ.. ( 12/28/2011-7:38 AM )
သူ ရိန် အဇ္ဈတ္တ
WE LOVE MIN KO NAING
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖော်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင် စစ်မှန်တယ်လို့သက်သေပြချင်ရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနေ့ရွေ့ ညရွေ့လုပ်မနေပဲ အကန့်အသတ်မရှိ ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရေးဟာ ပြည်သူနဲ့ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ဆဲအစိုးရကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်.....
ယုံကြည်မှုမရှိပဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူး အကြောက်တရားကြီးစိုးတဲ့ခေတ်ဆိုး သမိုင်းဆိုးကိုပြန်လှည့်ဖို့ရာကလည်း မြန်မာပြည်လုံးဝမဖြစ်တော့ပါဘူး ဒါကြောင့်လူတော်လူကောင်း တွေနိုင်ငံ့ရတနာတွေ လူသားအရင်း အမြစ်တွေဖြစ်တဲ့လူတွေကိုထောင်ထဲထည့်ထားမယ့်အစား တိုင်းပြည်အတွက်တထောင့်တနေရာကနေ ပါဝင်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် အမိမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ပိုမိုထွန်းလင်းတောက်ပလာမယ်လို့ ပြင်းထန်စွာကျမယုံကြည်တယ်.... ဝေးဝေးမကြည့်ပါနဲ့ အမေစုကိုအကျယ်ချုပ်ကို အသက်ကြီးမှလွှတ်တဲ့အခါ ကျမတို့တိုင်းပြည်ခြေလှမ်းတွေ ဘယ်လောက်နောက်ကျခဲ့သလဲ ? အဲဒီတခုတည်းနဲ့တင် ထင်သာမြင်သာရှိပါတယ်.............ကြယ်နီ
ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ အတူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။
9:51 28 december 2011
ဦးသိန်းစိန် ..လိမ်တယ် ညာတယ်ဆိုတာ မဆုံးနိုင်အောင်ဖုံးကွယ်ရတာပါ....လိမ်နေတာတွေ ညာနေတာတွေရပ်ပါတော....နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ. ၀န်ကြီးတွေ သမ္မတွေ ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ အကျဉ်းသားမရှိပါဘူးဆိုပြီး မလိမ်ပါနဲ.တော...ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်.အကျဉ်းသားအားလုံးကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ....
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး ........ ချက်ချင်းလွှတ် ချက်ချင်းလွှတ် (28. Dec. 2011 9:36am BKK)
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ညီအောင်ညှိထားသောအရာကား တစ်ခုတည်း။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ ဦးတည်ရာကား တစ်ခုတည်း။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ ဟစ်ကြွေးမှုက တစ်သံတည်း။
နေ့စဉ်မပြတ် တစ်ရံမလတ် ဟစ်ကြွေးနေကြ၏။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား လွှတ်ပေး။ ခုချက်ချင်းလွှတ်ပေး။ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ (2011.DEC.28) 11:50 pm Japan Standard Time.
(28th.DEC.2011) face book ပေါ်မှ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်နိုင်ငံကျဉ်းသားတို့အတွက်တောင်းဆိုမှုများ တောင်းဆိုသူများ၏ အမည်များနှင့် ဓါတ်ပုံအချို့ကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။